IVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (iIndiya e-Visa) | Ngathi
www.india-visa-online.com yiwebhusayithi yabucala ebonelela ngeenkonzo zesicelo ezikwi-Intanethi ezibandakanya ukunceda abasebenzisi kwinkqubo yezicelo zabo ze-e-Visa zaseIndiya. Senza inkqubo yokufumana ugunyaziso lohambo nge-elektroniki kuRhulumente waseIndiya ngokulula kakhulu kubafakizicelo. Iiarhente zethu zikwenza oko ngokunceda abafaki zicelo ukuba bagcwalise iifom zabo ze-e-Visa yaseIndiya, baphonononge zonke iimpendulo zabo, baguqulele naluphi na ulwazi kubo ukuba kukho imfuneko, bajonge lonke uxwebhu ukuze babone ukuba yonke into ichanekile kwaye igqibekile, nayiphi na igrama okanye iimpazamo zopelo. Siza kuqhakamshelana nabafakizicelo ngokuthe ngqo ukuba ngaba kufuneka ulwazi olongezelelweyo. Nje ukuba umfaki-sicelo azalise ifom yesicelo efumanekayo kwiwebhusayithi yethu, isicelo sabo sijongwa yingcali yokufudukela kwelinye ilizwe kwaye ekugqibeleni singeniswe kuRhulumente waseIndiya ekugqitywe kuye isigqibo sokuvunywa kwesicelo. Nangona isicelo sivunyiwe okanye asixhomekekanga kuRhulumente, ukugcwalisa isicelo ngobuchule bethu kuya kukuqinisekisa ukuba isicelo sikhululekile kuzo zonke iimpazamo.
Uninzi lwezicelo azizukuthatha ixesha elingaphezulu kweeyure ezingama-48 ukuba zilungiswe kwaye zinikezwe kodwa kwezinye iimeko ukuba ulwazi oluthile lufakwe ngokungachanekanga okanye lishiyiwe, isicelo sinokulibaziseka. Abafakizicelo akufuneki bakhathazeke malunga noko, nangona kunjalo, njengoko iiarhente zethu ziya kulandela kuzo zonke izicelo. Nje ukuba i-e-Visa yamkelwe nguRhulumente wase-India, uxwebhu lwe-elektroniki luya kuthunyelwa nge-imeyile kumthengi kunye nolwazi kunye neengcebiso ngokusetyenziswa kwayo.
Sizinze eMelika, eAsia naseYurophu kwaye sinokunceda abathengi bethu nangaliphi na ixesha naphina ngokujonga, ukuhlela, ukulungisa, ukuhlalutya, kunye nokuqhubekeka kwezicelo zevisa ngeenxa zonke. Asidibananga noRhulumente wase-India nangayiphi na indlela kodwa iwebhusayithi yabucala inceda kwaye ikhokele abafake izicelo ukuba bangenise isicelo sabo se-e-Visa saseIndiya kwi-Intanethi. Ukufaka isicelo kwiwebhusayithi yethu endaweni yewebhusayithi kaRhulumente waseIndiya kwi-e-Visa kunenzuzo eyongezelelweyo yokufumana isicelo sakho esiqwalaselwe liqela lethu leengcali. Sibiza imali encinci ngeenkonzo zethu.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye amathandabuzo, ungaxhumana I-Indian Visa kwi-Intanethi yeDesika yoNcedo. Ifomu yesicelo seIndiya Visa yifom online.
Kwiplatifomu yethu yomsebenzisi-umsebenzisi unokufaka kalula kuyo nayiphi na ii-visa zaseIndiya, kubandakanya Umkhenkethi waseIndiya e-Visa, Ishishini laseIndiya e-Visa, I-e-Visa yaseIndiya yoNyango, yaye Indibano ye-e-Visa yaseIndiya. Ngobuchwephesha bethu bamva nje, obunokuthenjwa, yonke inkqubo, kubandakanya intlawulo, iya kukhuseleka kwaye ikhuseleke ikhusele neemfihlo zomsebenzisi.
Iinkonzo esibonelela ngazo ngokuDityaniswa noZakuzo